iphone ကိုင်တဲ့လူရှိပါလားခင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited June 2009 in Other
iphone ကို gtalk သုံးလို့၇တယ်လို့ကြားပါ တယ်။ဘယ်လိုလုပ်၇မှာလဲ သိရင်ပြောကြပါ။ဘယ် ဆိုင်သွားသွင်းရမလဲဟင်။ကိုဟာကို gtalk setup file ကို run ရမှာလား။ရပါ့မလား iphone က Mac Os X သုံးထားတာ ကြီး။iphone ကို စိတ်ကုန်လာပြီ။bluetooth file tranfer လဲ မရ video မ၇ လို့ solftware ပြေးထဲ့ရသေး။အမလေးဟဲ့:14::14:ကောင်းလိုက်တဲ့ Apple company ထုတ် iphone ကြီးရဲ့။ဘာပဲပြောပြော မြန်မာပြည်မှာ nokia s60 platform သုံးကောင်တွေအကောင်းဆုံး egN95(8GB)။ဟီ:D ကြောငြာဝင်တာ။သြော်မေ့လို့ကျနော့် ဟာက2G နော် 3G ဆိုဒီထက်ဆိုးသေး။:14::14:
If your are in Myanmar that impossible. Yes you can access webs if your in us but not in myanmar.:P:P:P:P:101::101::101::101:
ဟုတ်တယ်...မန်းမှာတော့ gtalk လုံး၀သုံးလို့မရပါ။:O
you can download from.. www.fring.com and all messenger in one place. try it.. 3g is no available (totally impossible) in Myanmar. also you can get from http://www.google.com/mobile/apple/talk/
take it.. hope you will get easy..
မြန်မာပြည်မှာဆို၊ အဲဒါကြီးဝယ်ပြီးအကားပဲလေ။ ပိုက်ဆံဖြုန်းတာနဲ့အတူတူပဲလေ။ :P ကျနော်တို့ဆီမှာ Mobile Web မှမရှိတာဗျ။ ပြီးတော့ iphone ဝယ်သူတိုင်း မိမိတယ်လီဖုန်းလိုင်း ကုမ္ပဏီကနေ အင်တာနက် လိုင်းပါမယူမနေရလေ။ အဲဒီတော့ အကိုအနေနဲ့ offline applications တွေပဲသုံးလို့ရမယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာ UMTS စနစ်မရှိဘူးလေဗျာ။ (local wifi တော့မကြာမီ ရတနာပုံမှာ ရတော့မယ်တော့။ အဲဒီကိုပြောင်းပေါ့:D)
UMTS universal mobile telecommunications system: development ofstandards for the third generation
အခုနောက်ဆုံးထွက်တာဆို iphone 3G တဲ့။ speed 3G သုံးလို့ရတယ်တဲ့ အဲဒီဖုန်းလေးကနေ။ (:((
iphone OSX မှာဘာတွေပါမှန်းတော့မသိဘူးဗျ။ အနဲဆုံးတော့သီချင်းနားထောင်၊ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်။ (ipod အနေနဲ့လေ)
(မပူပါနဲ့အဲဒီUMTSနည်းပညာကို ကျနော်နိုင်ငံခြားမှာသွားသင်ဖို့လုပ်နေတယ်။ ပြန်လာတဲ့အထိစောင့်နော်:D) :P
ဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အကိုတိ်ု့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျနော်က တော့ iphone ကြီးကိုဝယ်မယ့်သူရှိတုန်းေ၇ာင်းပြီဗျို့။စိတ်နာတယ် iphone ေ၇:((။နောက်ဆုံးတော့လဲ N95 နဲ့ညားတော့တာပဲ။ဒီဖိုရမ်ကိုကျနော် phone ဝယ်မယ်ံ ကို____ မြင်ပါစေနဲ့ဗျာ:D:D
i phone ကိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ဘာလုပ်ဖို့ပါလဲ ခင်ဗျာ
နင်ဟာလေ တော်တော်နောက်တယ် :d:d
Nokia 5800 ပေါ်နေပြီ....
N95 လိုတော့ smart phone မဟုတ်ဘူး.......
အနော် i phone ကို super sonic(PAC) မှာသုံးတယ်.......
iphone ကို အိမ်မှာ internet ရှိရင်သုံးလို့ပိုကောင်းပါတယ်
၇န်ကုန်မှာသွားရင်းလာရင်း internet မိတဲ့နေရာကျရင်တော့သုံးလို့ရပါတယ်
သူက safari browser ကိုသုံးတာပါ
application တွေလိုချင်ရင်တော့ itune ကနေသွင်းရပါတယ်
အဲဒီကနေချိတ်ပီးတော့ iphone ထဲ ကို application တွေသွင်းပီးသုံးပါ
internet လဲကောင်းပါတယ် wi- max ရှိတဲ့နားဆိုရင် wifi mode လေး မှာ ရှာလိုက်ပါ
iPhone ပေါ်မှာ Linux ရပြီ.....ဟောဒီမှာသွားကြည့်ကြပါ....
ပြီးတော့ unlock လုပ်ချင်ရင်လဲ အလွယ်လေးဗျ...စမ်းတော့မကြည့်ရသေးဘူးဗျ..
http://www.quickpwn.com/ နဲ့ http://ziphone.org တွေကိုသွားကြည့်ကြဗျို့။
ကျွန်တော်တို့က iphone မကိုင်နိုင်ပါဘူးဗျာ သူထေးမဟုတ်
ဟိုနေ့က ipod ထဲကို ဂိမ်းထည့်ချင်လို့ mobile mother သွားတာ သူက super sonic ကိုညွှန်းလိုက်တယ်
ဘယ်နားမှာလဲမသိဘူး မိန်းထဲမှာမှန်းသိတယ် မတွေ့ဘူးဗျာ ပေးပါအုံး လိပ်စာလေး
တော်ကြာ ရှာပါများပြီး ဆိုင်မတွေ့ဘဲ စော်တွေ့နေအုံးမယ်(ပိုက်ပိုက် ကုန်ကုန်):))
လား.. 73 လမ်းပေါ်မှာလေ..ခွန် တို ့ရဲ ့ဆိုင် နားလေးမှာ.. 32*32 ကြားမှာလား တော ့မသိဘူး
unlock လုပ်နည်းလေးများသိရင် မစပါခင်ဗျာ။:6: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။:77: